Nooca dhiiggaaga iyo Dabeecada qofkaad tahay! – WARSOOR
Nooca dhiiggaaga iyo Dabeecada qofkaad tahay!
Nooca dhiig ee caalamka ugu badan waa O+ (38%), halka O- (6%) caalamka oo dhan. Dadka caalamka ku nool ee leh dhiig A+(34%) halka A- (6%).
Dadka leh dhiiga B+ (9%), halka B- (2%). AB waxaa leh dad caalamka ka ah 4%, nooca dhiig ee ugu yar caalamkananwaa AB- waxayna caalamka ka yihiin 1%, dadkan waa in ay aad utaxadaraan haday joogaan goob aan lahayn Bangi dhiig(Blood Bank).
Dabeecadaha Shaksiyadeed ee noocyada dhiigagaga.
Qof isku kalsoon
Qof umada dhex gali og(Social)
Qof firfircoon( Energetic)
Qof Dhanka wanaagsan wax ka eega(Positive)
Qof dareenkiisa aan qarsann karin
Qof khatarta qaata( Risk Taker)
Qof adeecid badan( Obedient)
Qof xishood badan
Qof akhlaaq leh(Polite)
Qof daacad ah( Loyal)
Qof nafhuris badan
Qof daryeel badan
Qof dhanka xun wax ka eega( Pessimistic)
Dad farxad badan
Dad firfircoon( Active)
Dad Naxariis badan( Kind)
Dad aan nidaamsanayn( Unorganized)
Dad buuq badan( Noisy)
Dad ilowsho badan( Forgetful)
Dad naftooda kaliya daryeel(Egocentric)
Dad madadaalada jecel (Entertaining Lovers)
Dad Hal abuur leh( Creative)
Dad diplomaasiyada kufiican( Diplomacy)
Dad isbadal badan( Flexible)
Dad aan la saadaalin karin( Unpredictable)
Dad aan faraxsanayn badanaa, Saaxiibtinimadana kufiicnayn( Moody and brooding)
Dad xirfado badan
Dad khatarta qaata( People who take risks)
Dad isku kalsoon
Dad daacad ah( Loyal)
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay Deeq loo balan qaaday
Waa maxay Sanboorku?Rhinitis?